Nezvedu - Zhuoer Chemical Co., Ltd.
Zhuoer Chemical Co., Zvishoma
Zhuoer Chemical Co., Limited iri munzvimbo yezvehupfumi-- Shanghai. Isu tinogara tichiteerera ku "Yepamberi kemikari, hupenyu huri nani" uye komiti kuKutsvagisa nekusimudzira tekinoroji tekinoroji, kuti iite kuti ishandiswe muhupenyu hwevanhu hwezuva nezuva kuita kuti hupenyu hwedu huve nani.
Zvino, isu tinonyanya kubata neye organic intermediates, agrochemicals, zvekuwedzera zvekudya uye mamwe epamberi makemikari. Izvi zvinhu zvemberi zvinoshandiswa zvakanyanya mu chemistry, mushonga, biology, OLED kuratidza, OLED mwenje, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, simba nyowani, nezvimwe.
Kwemazuva ano, isu tine mafekitori maviri ekugadzira muPurovhinzi yeShandong. Rinotaura nzvimbo 30,000 mativi metres, uye ane vashandi vanopfuura zana vanhu, izvo vanhu gumi vari mukuru mainjiniya. Isu tasimbisa yekugadzira tambo yakakodzera yekutsvaga, mutyairi bvunzo, uye kugadzirwa kwakawanda, uye zvakare kumisikidza marabhu maviri, uye imwe yekuyedza nzvimbo. Isu tinoyedza yega yega chigadzirwa pamberi pekusununguka kuti tive nechokwadi chekuti tinopa yakanaka mhando chigadzirwa kumutengi wedu.
Tinogamuchira vatengi vanobva pasirese kushanyira fekitori yedu uye kumisikidza mushandirapamwe wakanaka pamwechete!
Yedu Core Tsika:
Kugadzira tsika kumutengi wedu, kumisikidza win-kuhwina kubatana;
Kuita mabhenefiti kune vatinoshandira, kuvaita vararame vane mavara;
Kugadzira zvido zvebhizinesi redu, kuti riite kuti ikure nekukurumidza;
Kuita mupfumi wenzanga, kuti iwedzere kuwirirana
Zvemberi zvinhu, hupenyu huri nani: nerubatsiro rwesainzi uye tekinoroji, uye zviite kuti ishumire vanhu hupenyu hwezuva nezuva, kuita kuti hupenyu hwedu huve nani uye huve neruvara.
Kupa vatengi zvigadzirwa zvekutanga-kirasi uye masevhisi, kuita kuti mutengi agutsikane.
Kuedza kuve anoremekedzwa mupi wemakemikari.
Teerera zvivimbiso zvedu
Kupa zvizere chiyero kumatarenda
Solidarity uye kubatana
Kuchenjerera kune zvinodiwa nevashandi uye kusangana nezvinodiwa nevatengi